'Sequía' no andiany TVE vaovao manana endrika fanta-daza | Bezzia
'Sequía' no andiany TVE vaovao manana endrika fanta-daza
Susana godoy | 01/06/2021 14:00 | ankehitriny
'Haintany' dia efa zava-misy ao amin'ny TVE. Amin'ity tranga ity dia tsy ny lampihazo izay resahintsika matetika no manome vaovao mahaliana antsika. Toa ireo fantsona mahazatra ihany koa no miloka amin'ny tantara foronina ary amin'ity tranga ity dia avy am-pelatanan'ny mpilalao fanta-daza sy Espaniôla.
Ho an'ny zavatra toa manana fandraisana tsara ary ambonin'izany rehetra izany, amin'ny adihevitra fa azo antoka fa hisy akony tsy toa ny teo aloha intsony. Mampientam-po izy io, ka ho eo anilantsika ny mistery fa lohahevitra maro no ho ampiana amin'ireo izay tianay ho hita hatrany. Te hahafantatra bebe kokoa ve ianao?
1 Inona no tetika 'haintany'
2 Toerana ho hitantsika amin'ity andiany ity
3 Inona avy ireo endri-tsoratra ao amin'ilay andiany?
Inona no tetika 'haintany'
Manomboka amin'ny fahalalana izay ho hitantsika amin'ity andiany TVE vaovao ity miaraka amin'ny fahitalavitra portogey. Eny, rehefa nandroso isika, dia mampihetsi-po izany manomboka amin'ny zava-miafina lehibe tsy voavaha ao amin'ny tanàna iray. Hitan'ity toerana ity ny fomba nahatongavan'ny haintany. Saingy noho ny aminy dia fatin'olona roa miaraka amin'ny ratra voatifitra izay efa teo hatry ny ela. Manomboka eo dia tompon'andraikitra amin'ny fiezahana hamaha ity asa ratsy ity ny polisy.
Rehefa fantatra ny mombamomba ireo niharam-boina dia fianakaviana roa no miampita na dia tsy iray toerana aza. Saingy izany dia hiteraka tsiambaratelo maro sy fatorana miafina hiseho. Fa io kosa ankoatr'izay hahita famadihana, fitiavana ary faniriana be dia be isika. Amin'ny ankapobeny, efa manana famintinana ny zavatra rehetra izay hahatonga ny 'hain-tany' ho iray amin'ireo andiany vaovao hifandraisanao, azo antoka. Amin'izao fotoana izao dia manomboka ny fanaovana ny sarimihetsika, noho izany dia mila miandry kely kokoa isika.
Toerana ho hitantsika amin'ity andiany ity
Mazava ho azy fa misy toerana sasany amin'ny fanaovana sarimihetsika ho lasa mahazatra anao, satria voalaza fa hanomboka any amin'ny faritr'i Cáceres, ary koa any Madrid ny fandraisam-peo. Saingy araka ny efa nolazainay teo aloha fa fiaraha-miombon'antoka amin'ny fahitalavitra portogey izy io, dia tsy maintsy lazaina fa ny faritra ao Lisbon na Cascais dia ho toy ny tifitra lehibe ihany koa, araka ny nasehon'i VerTele! Noho izany, ny fahafantarana fotsiny ireo angon-drakitra ireo dia tsapantsika fa mampanantena zavatra be dia be izy io, satria ny toerana ihany koa dia manana hatsaram-panahy lehibe ary nanampy izany ny adihevitra dia efa afaka milaza betsaka momba azy.
Inona avy ireo endri-tsoratra ao amin'ilay andiany?
Amin'ny lafiny iray hitantsika Rodolfo Sancho, izay fantatsika rehetra fa nanomboka tamin'ny andiany toy ny 'Al left class' ary mitombo amin'ny hafa toy ny 'Amar amin'ny fotoan-tsarotra', 'Isabel' na 'The minister of time', ankoatry ny maro hafa. Manaraka azy ilay mpilalao sarimihetsika Elena Rivera placeholder image efa nahita azy tao amin'ny 'Servir y Protecte', 'La Truth' na 'Inés del alma mía'. Miryam Gallego dia anarana iray hafa izay mipoitra koa eo amin'ireo mpiady amin'ny andiany TVE. Samy 'mpanao gazety' sy 'Red Eagle' na 'tsiambaratelom-panjakana' dia samy nanana izany.
Ka raha hitantsika ny mpilalao fototra dia feno kintana mahafinaritra, tsy manadino Miguel Angel Muñoz ahatsiarovantsika azy avy amin'ny 'A step forward' na ny 'Ulysses Syndrome', ankoatry ny hafa. Ho hitantsika eo anilany koa i Juan Gea, izay manana asa lava be amin'ny fahitalavitra sy amin'ny tontolon'ny sinema ary na eo amin'ny tontolon'ny teatra miaraka amina asa marobe aza. Mpilalao sarimihetsika portogey Margarita Marinho ary mpilalao sarimihetsika Guilherme Filipe manatevin-daharana ny mpilalao koa izy ireo. Satria manomboka amin'ny fiandohan'ny fahavaratra fotsiny ny fakana sary azy ankehitriny, amin'izao fotoana izao dia tsy misy data intsony momba ilay andian-tantara. Fa manantena izahay fa tsy ho ela dia afaka mankafy ireo mpilalao sarimihetsika sy mpilalao sarimihetsika rehetra amin'ny efijery kely isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » ankehitriny » 'Sequía' no andiany TVE vaovao manana endrika fanta-daza
Tombony azo amin'ny fihodinana ho an'ny fahasalamana